Xoghayaha cusub ee Wasaaradda Duulista Hawada Hindiya oo lagu dhawaaqay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Xoghayaha cusub ee Wasaaradda Duulista Hawada Hindiya oo lagu dhawaaqay
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Xoghayaha Wasaaradda Duulista Hawada ee Hindiya
Shri Rajiv Bansal IAS (NL: 88) ayaa la wareegay xilka Xoghayaha, Wasaaradda Duulista Hawada ee Dowladda India, Ku -xigeenka Shri Pradeep Singh Kharola, IAS (KN: 85) taas oo ka dhalatay markii uu superannuation -ka ahaa 30 -kii Sebtember, 2021.
Shri Bansal waa Sarkaalka Adeegyada Maamuleed ee Hindiya ee dufcaddii 1988, kana tirsan kaadir Nagaland.
Waxa uu xilal badan oo muhiim ah ka soo qabtay Dawladda Midnimada oo uu ka mid yahay Guddoomiyaha iyo Maareeyaha Shirkadda Air India Ltd. ee Wasaaradda Duulista Hawada.
Waxa kale oo uu xilal muhiim ah ka qabtay Xukuumadda Nagaland.
Xilal badan oo muhiim ah ayuu ka soo qabtay Dowladda Midnimada oo ay ka mid yihiin Gudoomiyaha iyo Agaasimaha Maamulka, Shirkadda Air India Ltd., Wasaaradda Duulista Hawada; Xoghaye Dheeraad ah, M/o Batroolka & Gaaska Dabiiciga ah; Xoghaye Wadajir, M/o Electronics & Technology Technology; Xoghayaha, Guddiga Xakamaynta Korontada Dhexe (CERC); iyo Xoghayaha Guud, D/o Warshadaha Culus, M/o Warshadaha Culus & Shirkadaha Dadweynaha.
Waxa kale oo uu xilal muhiim ah ka qabtay Dawladda Nagaland oo ay ka mid yihiin Komishan & Xoghaye, D/o Caafimaadka & Daryeelka Qoyska, Nagaland; Guddoomiyaha & Xoghayaha, Waaxda Waxbarashada Dugsiga, Nagaland; Wakiilka & Xoghayaha, Waaxda Maaliyadda, Nagaland, iwm.
Waxay ku taallaa Rajiv Gandhi Bhavan oo ku yaal Gegida Diyaaradaha Safdarjung ee New Delhi, Wasaaradda Duulista Hawada ayaa mas'uul ka ah dejinta siyaasadaha iyo barnaamijyada qaranka ee horumarinta iyo nidaaminta waaxda Duulista Rayidka ee dalka. Waxay mas'uul ka tahay maamulka Xeerka Diyaaradaha, 1934, Xeerarka Diyaaradaha, 1937 iyo sharciyo kale duwan oo kala duwan oo ku saabsan waaxda duulista hawada ee dalka. Wasaaradani waxay maamushaa maamulida ururada ku lifaaqan iyo kuwa madaxbannaan sida Agaasinka Guud ee Duulista Rayidka, Xafiiska Badbaadada Duulista Rayidka iyo Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy iyo Hawlaha Waaxda Dadweynaha ee ku xiran sida Shirkadda Duulista Qaranka ee India Limited, Maamulka Madaarada Hindiya iyo Pawan Hans Helicopters Xaddidan. Guddiga Badbaadada Tareenka, oo mas'uul ka ah badbaadada safarka tareenka iyo hawlgallada marka la eego qodobbada Xeerka Tareennada, 1989 ayaa sidoo kale hoos imanaya maamulka maamul ee Wasaaraddan.
Agaasinka Guud ee Duulista Rayidka (DGCA) waa hay'adda sharciyeynta ee dhinaca Duulista Rayidka, oo ugu horreyn la tacaamusha arrimaha amniga. Waxay mas'uul ka tahay nidaaminta adeegyada gaadiidka hawada ee taga/ka imanaya/gudaha Hindiya iyo fulinta xeerarka hawada madaniga ah, badbaadada hawada, iyo heerarka kartida hawada. DGCA waxay sidoo kale xiriirisaa dhammaan hawlaha sharciyeynta Ururka Caalamiga ah ee Duulista Rayidka (ICAO).